မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Mandalay Food Guide (Informal Guide)
Mandalay Food Guide (Informal Guide)
မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် နေရာလိပ်စာ လမ်းညွန်
on Thursday, 17 May 2012 at 18:09 ·by ChoZin De Earthzprinzezz on Thursday, May 3, 2012 at 4:57pm ·ခုနက အစားအသောက်ညွန်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ မန်းလေးမှာ ရှိတဲ့ အထဲက ကျနော်သိသမျှဆိုင်လေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်၊
မုန့်တီမန်းလေးမုန့်တီမှာ နာမည်ကြီးတာကတော့ ၃၁ လမ်း ၈၄x၈၅ ကြားက စိုးစိုးမုန့်တီပင်၊ ရန်ကုန်က နာမည်ကြီးတွေ လာရင် လာစားကြရင်း နာမည်ကြီးတယ်ထင်တာပါပဲ၊ ကျနော်ကတော့ သိပ်မကြိုက် စိုးစိုးက အီသည် မုန့်တီဖတ်ကလဲ နည်းနည်း ချဉ် သည်၊သူ့ အောက်ဖက်တပြ မလွန်မုန့်တီတန်းက ဒေါ်သန်းမြက ပိုစားကောင်းသလိုပင်၊ဂေါဝိန်ဆိပ်နားက မုန့်တီကလည်းစားကောင်းတာပင်၊ ဒါပေမယ့် သူက မနက်နည်းနည်းနောက်ကျရင် ကုန်ပြီ၊မုန့်တီကို သိပ်လဲ ဈေးမကြီးပဲ သိပ်လဲ မအီတဲ့ ခိုတောင်နဲ့ မုန့်တီကြား စပ်ကြားလေး စားချင်ရင်တော့ ဗောဓိကုန်းထဲက Dynasty လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က ဆိုင်သေးသေးလေးရှိသည်၊ဘုရားကြီးအာနန္ခာစောင်းတန်းက ကြီးတော်ခွေးကတော့ မုန့်တီမရောင်းတော့ဘူး ထင်ပါတယ်၊ တခါသွားတော့ ထမင်းပဲရောင်းတော့တယ် ဆိုလား.......
ခိုတောင်မုန့်တီများသောအားဖြင့် ခိုတောင်မုန့်တီသည်တွေမှာ တရွာတည်းက ဖြစ်ကြသည်၊ မန်းလေး လမ်းမတွေပေါ်မှာ ညနေ ၂ နာရိမှ ၅ နာရီကြား လှည့်ရောင်းတတ်သည်၊မနက်ဖက် စားချင်ရင်ဖြင့် ၈၁ လမ်း ၃၀x၃၁ကြား နေရှင်နယ် ကျောင်းရှေ့မှာ ၇ှိသည်၊ ( သူကလဲ နာမည်ကြီးဗျ... ဂျာနယ်ထဲတောင် ပါလိုက်သေး )
မြီးရှည်မန်းလေး မြီးရှည် တွင် နာမည်ကျော်ကတော့ ဗထူးကွင်းမြီးရှည်ပင်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ နည်းနည်းပေါ့လို့ မကြိုက်၊ ကျနော့်အကြိုက်က ရတနာပုံဈေး အရှေ့ဘက်က ဇော်ကြီးမြီးရှည်.. သူက ပိုပြီး လေးလေးပင်ပင်ရှိသည်၊ပြီးတော့ ၃၃ လမ်းမှာ စိန်ဝင်းမြီးရှည်၊ လမ်းလည်ဘုရားနားက မြီးရည်ဆိုင် ၊ ၈၂ လမ်းက မန်ကျည်းရိပ်နှင့် ၁၉ လမ်း မြီးရှည်ကတော့ ၀က်အူတွေ ကလီစာတွေနှင့်ပါရနိုင်သည်၊ (ဒါပေမယ့် ၂ နာရီလောက်မှ ဖွင့်သည်)လမ်း ၈၀ တိုင်းကျော်ကတော့ မြီးရှည်အပြင် အခေါက်ကင် အသားကင်သုပ် ထမင်းပေါင်း ကြက်ခြေထောက် ဆီချက်ပါရသည်၊
ရှမ်းခေါက်ဆွဲရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေကတော့ ပေါလွန်းများလွန်းလှသဖြင့် နည်းနည်းပဲညွှန်းတော့မည်၊ ၇၄လမ်း ၃၄x၃၅ ကြားမှာ ရွှေမူဆယ်ရှိကာ အချိုအရသာ ကြိုက်သူတွေနှင့်သင့်တော်၏ ၊ သည်ဆိုင်တွင် ဆန်ချိုအေးလဲ ရသည်၊လမ်း ၈၀ မြကေခိုင်ဘေးကဆိုင်ကတော့ မနက်ဆိုလျှင် ကားတွေ တန်းစီနေတာပင်၊ညဘက် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ မြေအိုးမြီးရှည် စားချင်ရင်တော့ ၇၆လမ်း ၃၄x၃၅ ကြားက ညဈေးတန်းကို ပင် ညွှန်ရမည်ပင်၊ညဈေးတန်းမှ လားရှီုးဆိုင်တွင် ရှမ်းတို့ဟူးပျော့ ။ ၀က်ခြေထောက်ခေါက်ဆွဲကောင်းသည်၊အမဲလုံးခေါက်ဆွဲဆိုလျှင်တော့ ၃၅ လမ်း ၆၉x၇၀ ကြား က ဆိုင်က တော်တော်ကောင်းသည် ၊ ဆန်စီး အညိုနဲ့ ပိုကောင်းသည်၊ ( သူ့ဆိုင်ဘေးမှာ အိုးဆိုင် ရှိတယ်ဗျ )
ရှမ်းထမင်းမန်းလေးတွင် ပုံစား ရှမ်းထမင်းဆိုင်များမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက်အားထားရာပင်၊ ပိုက်ဆံ ၈၀၀။ ၁၀၀၀ ဖြင့် ထမင်းတနပ်ကို ဟင်းသုံးမျိုး ဖြင့် စားနိုင်သည်၊ဆေးကျောင်းတ၀ိုက်မှာတော့ လင်းလင်း၊ အေးချမ်းမြေ စသည့်ဆိုင်များရှိပြီး။ လမ်း ၇၀ ၂၉x၃၀ ကြားတွင်လည်း ရှမ်းထမင်းဆိုင်များ အတန်းလိုက် ရှိသည် ၊ရေစစ်ကန်နားက ၀င်းစံပါယ်ကတော့ ထမင်းမရပေမယ့် အခြား ရှမ်းအစားအစာ ငါးထမင်း ။ ဟင်းထုပ်။ ငါးဒုက္ခရသည်၊ ဆမ်ဆိုင်းမြီးရှည် ။ သဘောင်္သီးထောင်း စားကောင်းသည်။.
မြန်မာထမင်းမြန်မာထမင်းစားချင်သူများအတွက် ၂၇ လမ်းတွင် တူးတူးရှိသည်၊ ( ဒါပေမယ့် တူးတူးက ၀က် ၊ အမဲမရ ... ပြီးတော့ ဟင်းအမျိုး သိပ်မစုံ .. အရသာလည်း နည်းနည်း ပေါ့ပြီး အချိုကဲသလိုပင်) ၊ အေးမေတ္တာကတော့ ဟင်းပိုစုံသည် ( ၀က်သားဆိုလျှင်ပင် ၀က်သားနီချက် ။ အိုးကြီးချက်၊ ဟင်းလေးချက်။ ၀က်ပုန်းရည် ) အစုံရသည်၊ကျနော်တို့ အကြိုက်ဆုံးကတော့ မိန်းပေါက်နား မြောင်းကြီးဘေးက မြမဉ္ဖူပင်၊ သူက ဆိုင်လေးကသာ သေးသေးကုပ်ကုပ် ဈေးကတော့မသေး ၊
ဒံပေါက်မန်းလေးမှာ ဒံပေါက်ဆိုရင် ၂၆ လမ်း ကျုံးဘေးမှာ ဒေါ်သန်းမူရှိပါတယ်၊ မြို့မရုံနဲ့ မျက်စောင်းထိုးမှာ သင်းရှိပါတယ်။၈၃လမ်း ၂၈x၂၉ ကြားမှာ ပေါ်ပီ အဲလေ သင်္ဂဟ ဒံပေါက်ရှိပါတယ်။ကေမီမွန်ဒံပေါက်စားချင်ရင်တော့ အလှူအိမ်သာ တွေ့အောင်လိုက်ရှာကြပါ။ကျုံးမြောက်ဘက် ဂေါက်ကွင်းသွားတဲ့လမ်းမကြီးကနေ အနောက်ဘက်ကို ဖဲ့ဆင်းပြီုး မြောင်းလေးကို ကျော်လိုက်ရင် လမ်းဘေးမှာ ဒံပေါက်ဆိုင်လေး တဆိုင်ရှိပါတယ်။ မနက်အစောကြီးရောင်းတာပါ၊ ၈ နာရီလောက်ဆိုကုန်ပါပြီ။ ဒံပေါက် ။ ပဲထမင်း ။ အုန်းထမင်းရပါတယ်။ တပွဲမှ ၂၀၀ ရယ် ကြက်သားထည့်မှ ၇၀၀ .... စားလို့လဲကောင်းပါတယ်၊
အသုပ်စုံအသုပ်စုံစားချင်လျှင် လမ်းပေါ်မှာလာတဲ့ ဈေးသည်ကို ထိုင်စောင့်လျှင်စောင့် မစောင့်နိုင်လျှင်တော့ ဈေးချိုထိ သွားရမှာပင် ၊ ဈေးချိုအနောက်ဘက် ကိုင်းတန်းဈေးထဲမှာ ဆိုင်ကြီးနှင့် အသုပ်စုံသည် တသည်ရှိသည်၊ ဈေးချိုတောင်ဘက်က အသည်ကတော့ တခါက ကျနော့်ကို တပွဲ ၁၅၀၀ ယူလွှတ်လိုက်သည်၊ ( ရက်စက်ပါပေ့ )ကန်တော်ကြီးက မိုးကောင်းအသုပ်ဆိုင်ကတော့ ဆိတ်သားခြောက်သုပ် ကောင်းသည်၊ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေး ၊ တခြားအသုပ်တွေလဲ မဆိုးပါ . ဒါပေမယ့် သူက ထမင်းဆီဆမ်းဆိုလျှင် ဘာလချောင်ကြော်ပေးပြီး ထမင်းသုပ်မှာလျှင်ကြ မပေး၊ ( ကျနော်ကတော့ မရရအောင် ဇွတ်တောင်းတာပဲ )၇၆ လမ်း ၃၃ လမ်းနားက အခြောက်ကြီး ၂ ယောက်ရဲ့ အသုပ်လဲ စားကောင်းတာပင်၊ဆေးကျောင်းက လူတွေကတော့ စံအေးက လက်ဖက်သုပ် ရှောက်သီးသုပ်နှင့် အသက်ဆက်ကြတာများသည်၊လမ်း ၈၀ လှကလေးစိန် ထိုးမုန့်ဆိုင်ရှေ့က ထမင်းသုပ်ကတော့ အမဲ အချင်း ၀မ်းတွင်းသားနှင့် ရသည်၊ စားကောင်းသည်း၂၆လမ်း ကျုံးထိပ် Happy Palace နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အရီးတောင်းဆိုင်ရှိသည်.။
၀က်သားတုတ်ထိုး၃၄လမ်း B.N ဗားမား မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တွတ်ပီ ၀က်သားတုတ်ထိုးရှိသည်။ တုတ်ထိုးအပြင် ကြာဇံကြော် နှင့် ကော်ပြန့်လဲရသည်၊ သူ့ကော်ပြန့်က အထဲမှာ ၀က်သားအစာသွပ်ထားသဖြင့် အသားလိပ်လိုမျိုးဖြစ်ကာ စားကောင်းသည်၊ ဒါပေမယ့် ဟင်းရည်ကနည်းနည်းပေါ့သည်၊ ( တုတ်ကြီးကြားရင် ဓါးနဲ့လိုက်ခံရဥိးမယ် )လမ်း ၃၀ ၆၉ ထောင့်မှာ တုတ်ထိုးတဆိုင်ရှိသည် သူလည်းမဆိုး၊ လမ်း ၇၀ ၃၂ထောင့် အာကာမင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က တုတ်ထိုးကတော့ ကြံမဆိုင် ဟင်းရည်နှင့်ဖြစ်သည်၊ လမ်း၃၀ ၈၁x၈၂ကြား က ဆိုင်လဲ စားသူများသည်၊ရတနာပုံဈေး KD ကြယ်သီးဆိုင်ရှေ့က ဆိုင်ကတော့ ဈေးမီးလောင်ပြီး ဘယ်ရွှေ့သွားလဲမသိ၊ သူ့ညီမတွေကတော့ ၁၄ ကျောင်းရှေ့မှာ ထွက်သည်၊၁၆ ကျောင်းရှေ့က မြင့်လွင် လည်း နာမည် ကြီးသည်၊ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီး သလိုပဲ၊ဗောဓိကုန်းဘက်က ၆၉လမ်းကို အကွေ့ဘက်မှာ once more တို့လို တုတ်ထိုးဆိုင်လေးတွေလည်းရှိသည်၊
ကော်ပြန့်ကြော်လမ်း ၈၀ ၃၈ လမ်းထောင့်က ကော်ပြန့်ကြော်ဆိုင်က အချဉ်ကောင်းသည်၊ ငါးဖယ်ကော်ပြန့် ၊ ငုံးဥကော်ပြန့်။ သီးစုံ ။ အာလူး အစုံရသည်၊၆၉ လမ်း ၂၇လမ်းထောင့်က ဆိုင်ကတော့ ကော်ပြန့် အပြင် အကြော်စုံပါရသည်၊IWTC ရှေ့က ကော်ပြန့်ကြော်က လည်း အတော်ကောင်းတယ်လို့ ကျနော့် အမတစ်ယောက်က ညွှန်းထားပါတယ်၊
ဖက်ထုပ်ကြော်လမ်း၈၀ လမ်း ၃၀ ဖူဂျီစတိုးဘေးက ဖက်ထုပ့်ကြော်ကစားကောင်းသည်၊ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ရှင် တရုတ်မယားက ကပ်စီးနည်း .. အချဉ်တောင်းလျှင် ပေးချင်သလိုလို မပေးချင်သလိုလိုနဲ့၊၃၂ လမ်း ၈၂ x ၈၃ ကြားမှာလည်း တဆိုင်ရှိသည်၊ ဗထူးကွင်းထောင့်က သားသတ်လွတ်ဖက်ထုပ်ကြော်ဆိုင်လေးကတော့ ရှိမှ ရှိသေးရဲ့လားမသိ၊ တပွဲမှ ၃၀၀ ရယ်၊၃၇လမ်း စန္ခာမေနှင့် မျက်စောင်းထုိး Cafe House က ဖက်ထုပ်ကြော်ကတော့ တပွဲဆို တပွဲ အီဆောင့်နေတာပင်၊
ဖက်ထုပ်ပေါင်းဖက်ထုပ်ပေါင်းကတော့ စနွာမေ ကိုပဲ ညွှန်းရမည်၊ ဖက်ထုပ်ပေါင်းအပြင် ဖက်ထုပ်ကြော်၊ ဆာတေး၊ အသားလိပ်ကြော် တွေလဲ ရသည်၊ ဒီတခေါက်သွားစားတော့ သိပ်မကောင်းတော့ ဖက်ထုပ်ပေါင်းကလဲ မာဂေါက်ဂေါက်... ဆာတေးကလဲ အချဉ်ရည်က ကျဲတဲတဲနဲ့
အာပူလျှာပူအာပူလျှာပူ တွင် ကျနော်တို့လက်စွဲက နန်းရှေ့ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေရုံးနားက အာပူလျှာပူဆိုင်ပင်၊ သူ့ဆိုင်က ပဲသီးများများနှင့် ငါးဖယ်သုပ် စပ်စပ်ကိုလဲ ကြိုက်ကြသည်၊နောက်တဆိုင်ကတော့ အောင်တော်မူ ဘုရားနားက ရွှေအိ ထင်တယ် နာမည်က အာပူဆိုင်၊ ကယ်လီ church နားက အာပူလျှာပူဆိုင်ကတော့ တခြား ထမင်းသုပ် လက်ဖက်သုပ် ရှောက်သီးသုပ်တွေပါရသည်၊
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မန်းလေးက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုသည်မှာ လက်ဖက်ရည် ကော်ဖီ. ပလာတာ ထပ်တရာ နံပြားကစလို့ မုန့်တီ မုန့်ဟင်းခါး မြီးရှည် မှသည် ထမင်းဆီဆမ်း . ထမင်းဟင်း အထိ အစုံရသည်၊မန်းလေးတွင် အကြီးဆုံးလက်ဖက်ရည်ဆိုင် အုပ်စုမှာ မင်းသီဟ နှင့် ယူနီစံ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ရွှေပြည်မိုးကလဲ နေရာတကာ တွေ့လာရတာပင်၊. လမ်း၈၀မှ ၇၃ ကို ရွှေ့သွားသည့် ပါဝါ လက်ကီး ဆိုင်ကို အစက ကျနော်က ရှဝါ လက်ကီး ချည်းပဲ ဖတ်မိသည်၊.aအောင်တော်မူဘုရားနားက cafe blue ကတော့ ညဘက်ဆို တော်တော်စည်သည်၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျြွေမုန့် ရသည်၊( မုန့်ဗိုင်းတောင့်လို့လဲ ခေါ်တယ် ဗျ )ဆေးကျောင်းနားက ဆိုလျှင်တော့ အချစ်ရွာ ရှိသည်၊3color ရှိသည်၊ ဆေးကျောင်းသက် ၇င့်သော ကျောင်းသားတချို့ ထိုင်တတ်သည့် မမေ့နိုင်ရှိသည်။ မမေ့နိုင်ကတော့ မိန်းကလေး ထိုင်တာတော်တော်နည်းသည်၊ဆေးကျောင်းတောင်ဘက် ဆိုင်ကယ် အပ်တဲ့ကွင်းထဲမှာတော့ Banyan Groove ရှိသည်၊မိန်းဘက်ထဲဆိုလျှင် Friend ရှိသည် ။ ပန်းကမ္ဘာရှိသည်၊ Dynasty ကတော့ တော်တော်ချောင်ကျသော ဆိုင်ဖြစ်ပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ကောင်းသလို ချက်ခုံ ကာတွန်းစာအုပ်တွေပါရှိလို့ လူစည်သည်၊ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုလျှင် ၃၅ လမ်းက ကီးမားတင်ဝင်း . ၃၅ လမ်း နှင့် ၂၆ လမ်းက ကရ၀ိတ်။ လမ်း ၃၀ အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးနားက ယူနီစံ။ ၇၄ လမ်း ၃၃ လမ်းထောင့်က လှိုင်းတို့ရှီသည်၊ ၈၃ လမ်းက မင်းမင်းကျော်ရှိသည်၊ မင်းမင်းကျော်က ထမင်းကြော်ကို ချဉ်ပေါင်ကြော်လေးနဲ့ ကောင်းသည်၊
အအေးဆိုင်လမ်း၈၀ ဖားသားလဖုန်းကျောင်းေ၇ှ့မှ ဖောင်တော်သီတွင် အအေးနှင့် သဘောင်္သီးထောင်း ကြက်ညှပ် ရသည်၊ အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးက နို့အေးပါ၊ကျုံးရှေ့ဘက်မှာ ညဘက်ဆိုလျှင် အစိမ်းရောင် နယ်မြေ ရှိသည်၊Breeze ကတော့ လမ်း၇၀ ၃၂x၃၃ ကြားတွင် ရှိပြီး ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့် အကြော်စုံပါရသည်၊ဆေးကျောင်းတ၀ိုက်တွင်လည်း အအေးလှည်းလေးတွေ တော်တော်များသည်၊ကျနော့် ကျောင်းတက်တုန်းက ကျနော်တို့ တဖွဲ့ရဲ့ ရုံးချုပ်က အချစ်ရွာရှေ့မှ ဦးလေးကြီးဆိုင်တွင် ဖြစ်သည်၊ ဦးလေးကြီးဆိုင်က ကော်ဖီအေးကတော့ ကျနော့် အသဲစွဲပင် တရက် ကို ၃ ခွက်လောက်သောက်ဖြစ်သည် ( star buck ထက်တောင်ကြိုက်သေးတယ် ) .... ပြီးတော့ ဦးလေးကြီးဆိုင်က ကျောင်းထဲ အ၀င်အထွက်ကော လမ်းမပေါ်ကော အချစ်ရွာထဲပါ မြင်ရလို့ အကွက်အကွင်းကောင်းသည်၊ ( အချင်းချင်းတွေဆိုတော့ ကပ်ကြော်ငြာပေးတာ )
ကော်ဖီဆိုင်ကော်ဖီဆိုင်များတွင် လမ်း ၈၀ ၂၅ ထောင့်က V Cafe က အရင်ကတော့ စားဖိုမှူးတော်တော်ကောင်းသည် .. အခုတော့ ပြောင်းသွားပြီလားမသိ ( အမဲသား ဘာဂါ တော်တော့်ကို ကောင်းသည် )ကျုံးရှေ့က Cafe City ကတော့ နေ့လယ်ဘက် ညဘက်ဆို လူများပြီး ဆူလွန်းလို့ မထိုင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ၊JJ ကတော့ အစားအသောက်လဲ မဆိုး .. ခုနေရာ အသစ်ပြောင်းပြီးတော့ မရောက်ဖြစ်တော့ ။။။BBB က တော့ Mixed Grill ကြိုက်သည်၊cafe melody က ဆိုင်ကျဉ်းပြီး ထိုင်လို့မကောင်း။ ၇၈လမ်းပေါ်က Riverar က အောက်ထပ်မြေအောက်ခန်းက ခြင်ကိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ဆိုင်က ဆီသိပ်မသန့်။လမ်း ၈၀ မှာ နဂိုက ဖွင့်သည့် Cafe Jin က unplugged ၀ိုင်းလေးက အဆိုတော် ၂ ယောက်က တော်တော့်ကို အသံကောင်းသည်၊ အရင်က ညဘက်ဆို ကျနော်နှင့် ထက်ကြီး ၂ ယောက် ကော်ဖီတခွက်မှာပြီး သီချင်းသွားနားထောင်ကြသည်၊ အခုတော့ ဆိုင်ပိတ်သွားပြီ...၂၇ လမ်း လမ်း ၇၀ ထောင့်က Koffee Korner ကတော့ ဒီနောက်ပိုင်း ထိုင်ဖြစ်သည်။ အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျနော်တို့ အကြိုက်က Chicken Basket .. spaghetti bolognise နှင့် JD coffee ဖြစ်သည်။ ( ကိုသူရအောင် ဖျော်တဲ့ JD coffee က ပိုသောက်ကောင်းတယ်ဗျ )
ဘီယာဆိုင်ကတော့ ထိုင်လို့ နည်းနည်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်ပဲ ညွှန်တော့မယ်၊၃၅ လမ်းက Beer Rain ကတော့ သုံးထပ်မှာ အောက်ဆုံးထပ်က ဒီတိုင်းဝိုင်းလေးတွေ .. အလယ်ထပ်က ကော်ဖီဆိုင် ခပ်ဆန်ဆန် အဲကွန်းခန်းနဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်က လဟာပြင် ကြိုက်တာ ထိုင်ရုံပင်၊ အဲ့ဒိဆိုင်မှာ ကောင်းတာကတော့ ငါးအရိုးလွတ်။ မှိုကန်စွန်းနဲ့ ။ ၀က်ပေါင်ခြောက်သုပ်ပါ၊အဲ့ဒါနဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ရွှေကောင်းကောင်းရှိသည်၊လမ်း ၃၀ အကင်တန်းမှာတော့ ကျနော်တို့ ကိုသူရိန်တို့ ထိုင်တတ်သည့် အမြဲကောင်း ရှိသည်၊ အဲ့သည်ဆိုင်က ခရုဟင်း ကောင်းသည်၊ကျုံးအရှေ့ဘက်မှာဆို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ Paradise ရှိသည်၊ အင်းဝ ကတော့ မိန်းကလေး ထိုင်လို့ သိပ်မကောင်းလို့ ထင်သည်၊၇၃ လမ်း ၂၇ နှင့် ၂၈ မှာ ၀င်းဝင်းရှိသည်၊ သူက စည်ဘီယာမရ။ုပုလင်းပဲရသည် ဒါပေမယ့် ကျနော်က သူ့ဆိုင်က မာလာဟင်း ကြိုက်သည်၊သိပံလမ်းဘက်မှာဆို Jasmin Garden ရှိသည်၊ သူ့ဆိုင်က ငါးမျှစ်ချဉ်စားကောင်းသည်၊ ( နည်းနည်းတော့ သံပုရာသီးလေး ညှစ်လိုက် ဆားထည့်လိုက်နဲ့ ပြင်ယူရတယ်)ကုတင် ၃၀၀ ဆေးရုံနားမှာ ရွှေဆည်းဆာ ရှိသည်၊ အရင် ကတော့ အာလူးကြော်ကောင်းသည် ( အခုတော့ အကြော်ဆရာ ပြောင်းသွားပြီ ထင်တယ် )၆၁လမ်းမှာ M Bar ရှိသည်။ ပါတီ လုပ်ချင်သူများ အတွက်တော့ သင့်တော်သည်၊ကန်တော်ကြီးမှာဆို ၀င်းဝင်းရှိသည်၊ ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်သောက်ချင်လျှင် ကောင်းကောင်းရှိသည်၊၊ ဒဏ္စာရီ ရှိသည်၊ဆခွံနှင့် ရှမ်းအရက်ကြိုက်တတ်လျှင် ၇တနာပုံဈေး အရှေ့ဘက်မှာ သျှမ်းသျှမ်းတောက် ရှိသည်၊ဈေး တောင်ဘက်က 115 ကတော့ အ၇က်သမားဝါရင့်ကြိးတွေ ဆိုင်ထင်တာပဲ။ အဲ့ဒီဆိုင်က ဂျင်သောက်ကောင်းသည်၊
ထန်းရည်မန်းလေးတွင် အဓိက ထန်းရည်ရသည့် ၃ နေရာက အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတော ။ ရန်ကင်းတောင် ထန်းတောနှင့် ဦးပိန်က ထန်းတောပင်၊ဦးပိန်က ထန်းတောမှာ ထန်းရည်စစ်စစ် မရနိုင် ။ ဒါပေမယ့် ကြွက်ကြော်သုပ်ရသည်၊ ( ဒါကလဲ ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဘက်က ဆိုင်တွေ မှာပဲ ရတာနော် .... ဟိုဘက်က ဆိုင်တွေ မှာ မရဘူး ) ဆိတ်သားကို ငရုတ်သီး ကြက်သွန်ဖြူ ပင်စိမ်းရွက် နဲ့ ရောထောင်းပြီး ရှောက်သီးညှစ်ထားသည့် ဆိတ်သားထောင်း စပ်စပ် ။. ငါးကြော်။ ပြောင်းဖူးကြော် စားကောင်းသည်းရန်ကင်းတောင် ထန်းတောကလည်း ထန်းရည်အစစ် မရတော့။ ပြီးတော့ လူအရမ်းများလာသည်၊ တဲတွေ မှာ အမြဲတမ်းလူအပြည့် ။ တခါ အရင် ထန်းတော မရောက်ခင် မှာ ဆိုင်အသစ် တဆိုင် ထပ်ဖွင့်ထားသေးသည်းရန်ကင်းတောင်နဲ့ ဆေးဝါး ကြားက လမ်းတောင်ဘက် အခြမ်း လယ်ကွင်းထဲမှာ တော့ ထန်းတဲလေး တတဲ ရှိသည်၊ အဲ့သည်မှာတော့ ထရည်ပုစွန်ဆိတ်ခုန်လေးနဲ့ ကြွက်ကြော်လေးရသည်၊ လယ်ကွင်းဘေး လေတဖြူးဖြူးနဲ့ ဇိမ်ပဲ ။ရေတံခွန်တောင်သွားသည့်လမ်းမှာလဲ ထန်းရည်ရပြီဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ထန်းတဲလေး တခု ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် သူက နည်းနည်း ညစ်ပတ်သည်၊
မနက်စာ ထမင်းကြော်မနက် ထမင်းကြော်စားချင်သည့်သူများအတွက် ၃၅ လမ်း ၇၉ လမ်း န၀ရတ်ရိပ်သာထဲတွင် နံနက်ခင်း ရှိသည်၊၇၁လမ်း ၂၇ လမ်းထောင့်က မူလတန်းကျောင်းဝင်းလေးထဲမှာ လည်း ထမင်းကြော်ဆိုင်တဆိုင်ရှိသည်။ သူက အသားကြော် အရံ မျိုးစုံနှင့်ရသည်၊သူနှင့်မျက်စောင်းထိုးက အိမ်ဆိုင်လေးကတော့ ထမင်းကြော်တပွဲကို ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့လဲ စပ်လို့ရသည် ကြာဇံကြော်နဲ့လဲ စပ်လို့ရသည်၊
ညနေစာ ထမင်းကြော်ညနေဘက်ဆိုလျှင်တော့ ၇၇လမ်းတောက်လျှောက်တွင် အာစင်နယ် ရွှေမန်းမေ အစရှိသော လှည်းတွေနှင့် ထမင်းကြော်ဆိုင်တွေရှိသည်၊ ကြက် ၀က် ဆိတ် ငါး အကြော်မျိုးစုံ နှင့် ထမင်းကြော်ကို ငံပြာရည်ဆီသတ် . ငပိထောင်း ၊ တို့စရာ၊ ချဉ်ရည်နှင့် မြိန်မြိန်ကြီးစားနိုင်သည်၊
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲမန်းလေးမှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ ရှိန်းဆီချက်ပင်။ ဒါပေမယ့် စားရတာ စိတ်မရှည် ။ အဲ့သည် ဘွားတော်က ဆီချက်လေး တမျှင်ကို ပန်းကန်ထဲထည့်လိုက် ပြန်ဖယ်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက်နှင့် တော်တော်နဲ့ မပြီး။၂၈ လမ်း က ဒေါ်စင်းယုံ က ဆီချက် ထမင်းပေါင်း ဆန်ပြုတ်လဲ ကောင်းတာပင်၊လမ်း ၈၀ ပေါ်က မင်းဟိန်နဲ့ ရုံးစိန်က တော့ ပါဆယ် ထုပ်စားတာ ပိုအဆင်ပြေသည်၊
ဟိုဆိုင် ဒီဆိုင်ဒါကတော့ ဘယ်စာရင်းထဲ ထည့်လို့ ထည့်ရမှန်းမသိတဲ့ ဆိုင်တွေပင်ဆုံနေကြ ကတော့ ၃၄လမ်း န၀ရတ်ရိပ်သာ မြောက်ဘက်အပေါက်က ဆိုင်လေးပင် ။ ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ ဘာမှ မကောင်း။ ဒါလဲ ထိုင်ကြတာပါပဲ။ လက်ဖက်ထမင်းကို လက်ဖက်အသား ကြမ်းကြမ်းနှင့် ခပ်စပ်စပ်လေး ရသည်၊၆၉လမ်း ၃၅ လမ်းထောင့်က တက်နေ၀င်းက ငါးသံပုရာကောင်းသည်။ အဲ့ဆိုင်နှင့် မျက်စောင်းထိုးလောက်တွင် ဂဏန်းချက် ဂဏန်းမဆလာကောင်းသည့်ဆိုင်ရှိသည်၊ စီချွမ်းဆိုလားပဲ နာမည် မမှတ်မိ၊နန်းရှေ့က မေတ္တာရိပ်ကတော့ နံရိုးပေါင်းခေါက်ဆွဲမဆိုး၊လမ်း၇၀ ၂၇လမ်းထောင့်က မူလတန်းကျောင်းပေါက်မှာ နေ့လည်ကျောင်းဆင်းချိန်ဆို ရှမ်းညီအစ်မ ၂ ယောက် တိုးဟူးသုပ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ။ တို့ဟူးနွေးရောင်းသည်၊ သူတို့ဆိုင်က တို့ဟူးသုပ်က ရှမ်းလက်ရာ ချိုချဉ်စပ်လေး စားကောင်းသည်၊၇၇လမ်း ၃၂x၃၃ ကြားက Yangon food villa ကတော့ စားစရာ စုံစုံရသည်၊ အဲ့ဒီဆိုင်က ၀က်စတူးက ၀က်သား သုံးထပ်သားကို ကြားထဲမှာ နံရိုးနုလေးတွေနဲ့ စားကောင်းသည်၊ ကင်မ်ချီ ထမင်းကြော်တို့ ဘာတို့လဲ ရသည်။အမျိုသမီးဆေးရုံကြီး တောင်ဘက် လမ်းကြား ထဲက ခို့ခို့ရို့ကတော့ ဖက်ဖယ်ထမင်း ။ ငါးထမင်းပေါင်း ၊ အုမ်းရိုက်စ် စားကောင်းသည်၊၂၇လမ်း ၈၀x၈၁ ကြားက မတင့် ဖက်ထုပ်ပြုတ်ဆိုင်ကတော့ ညနေဘက်မှ ဖွင့်သည်၊
ရေခဲမုန့်မန်းလေးမှာ ရေခဲမုန့် နာမည်ကြီးတာကတော့ ကုံးထက်ပါ... ကြက်ဆီထမင်းလဲ နာမည်ကြိးပါတယ်.. သူ့ရေခဲမုန့်က အုန်းသီးနံ့လေး နည်းနည်းသင်းပါတယ်.....ဟိုရှေးကတည်းက နာမည်ကျော်တာကတော့ နိုင်လွန်ပါ. .. ခရီးသွားလမ်းညွှန်တွေထဲမှာထိပါတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားသားတွေ တကူးတက လာစား တတ်ပါတယ်....ညဘက်မှ ရေခဲမုန့် စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၂၆လမ်း ၈၃ ထောင့်က အဇစ်က ရေခဲမုန့် ၊ မလိုင် ၊ ကူးဖီးလ် စပယ်ရှယ် လစ်ပါ၇၆လမ်း ၂၇ x ၂၈ ကြားက ရွှေသုခကတော့ တခါတလေ ဆားပေါက်ပြီး ငန်လို့ ကျနော်က သိပ်မကြိုက်ပါဘူးလမ်း ၈၀ ပေါ်က ရွှေနိုင်လွန်ကလည်း ရေခဲမုန့်သားမာပါတယ်ရေခဲမုန့်ကို ကတော့လေးနဲ့ စက်ကညှစ်တဲ့ အခွေ အခွေလေး စားချင်ရင် ၀င်းလိုက်နဲ့ မြို့မရုံမှာရှိပါတယ်... တခါတလေ နှစ်ရောင်စပ်ရပါတယ်.......၃၃ လမ်းက ပွိုင့်နေကြာစေ့ ဆိုင်မှာလဲ ရေခဲမုန့်ရပါတယ်.........
ပေါက်စီမန်းလေး ပေါက်စီဆိုတာနဲ့ အားလုံး မန်းမြို့တော်ကို ပြေးမြင်ကြမှာပါ (နန္ခာလှိုင်တော့ မမြင်ကြနဲ့ပေါ့ဗျာ )အဲ့လို ပေါက်စီမျိုးကို မစားချင်ပါဘူး ပါးပါးလွှာလွှာနဲ့ ခုနှစ်လွှာကိုမှ စားချင်ပါတယ်ဆိုသူတွေ အတွက် မြို့ဂုဏ်ေ၇ာင် ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၈၃ လမ်းပေါ်မှာ ရုံးစိန် ပေါက်စီ ဆိုင် ရှိပါတယ်။ သူက ပေါက်စီ တမျိုးတည်းပဲ သီးသန့်ရောင်းပြီး အလွန်ဆုံး မနက် ၈ နာရီ ၉ နာရီ အထိပဲ ရောင်းပါတယ်၊ ၃၃ လမ်း ၈၂ x ၈၃ ကြားက ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာလည်း ခုနှစ်လွှာနဲ့ ကြက်သား ကောက်ညှင်းထုပ် ရတတ်ပေမယ့် အခုတော့ ပိတ်သွားပီ ထင်ပါတယ်၊ပေါက်စီ ပိစိကွေး သေးသေးလေးတွေ စားချင်တယ် ဆိုရင် တော့ ၆၄ လမ်း တရုတ်ကျောင်းရှေ့က မုန့်ဈေးတန်းမှာ ပေါက်စီဆိုင်ရှိပါတယ်၊ဒါကတော့ ထပ်မံ အကြံပြုထားတဲ့ ဆိုင်တွေပါ......
Aung Khant Phyo ၏ အဖြည့်နန်းရှေ့ ဈေးထဲက မနက်ပိုင်းမှဖွင့်တဲ့ အန်တီစန်းလွင်ရဲ့ မုန့် တီဆိုင်လေးကို ညွှန်းချင်ပါတယ်.. နံနက်အစောကြီး သုံးလေးနာရီလောက်ကတည်းက မင်းကွန်းဘက်ကမ်းရွာကနေပြီးတော့ မန္တလေးမြို့ အရှေ့ ပြင်လို့ ခေါ်တဲ့ နန်းရှေ့၁၉လမ်းဈေးထဲအထိ လာရောင်းတဲ့ အန်တီစန်းလွင်ရဲ့ လက်ရာကတော့ ဈေးနှုန်းချိုသာပေမယ့် လက်ရာကတော့ ညီမချိုကြီးပြောခဲ့တဲ့ဆိုင်လက်ရာတွေထက် မသာရင်နေမယ် မလျော့ပါဘူး မန္တလေးကိုချစ်တဲ့ အန်တီစန်းလွင်ကတော့ မိုးရွာရွာ နေပူပူ နန်းရှေ့ လက်လုပ်လက်စားများအတွက် နံနက်စာ အားဖြည့်ပေးနေသူတစ်ယောက်မို့ လို ကျွန်တော်ကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရော လက်ရာအနေနဲ့ ရော ချစ်လို့ အမြဲသွားအားပေးမိပါတယ်...ကဲ နန်းကြီးနဲ့ မုန့်တီဘာကွာလို့ လဲကွ လို့ မေးချင်သူတွေ သွားပြီးအားပေးသင့်ပါတယ်....
Wunna Zaw ၏ အဖြည့်နဲနဲထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ..
ခုတော့ သတိရသမျှ အာသီသရှိသမျှ ရေးလိုက်တယ်နောက်သတိရမှထပ်ဖြည့်တာပေါ့ :D
Myo Htet Zaw · 36 mutual friends၃၁လမ်း ၇၁၊ ၇၂ ကြားက ရွှေရောင်လင်းဆိုတဲ့ မြန်မာအစားအစာ နံနက်စာဆိုင် လဲ ကောင်းတယ် ။ ဥပုဒ်နေ့ နဲ့ ဆန်းဒေးဆို ကြက်သားခနုံ ရတယ် ။ဒိန်ချဉ်ဆို 76ညဈေးတန်းက ရွှေသတ္တိနို့ပါတီလဲ ကောင်းတယ် ။ ထန်းလျက်နဲ့ ရတယ် ။ 34လမ်း 73 /74 ကြားထဲက ရွှေအိုးလဲ ကောင်းတယ် ။
Aung Ko Ko Han မြန်မာဟင်းနဲ့ပါတ်သက်ရင် မိန်းပေါက်နားလေးမှာ မိသာစုထမင်းဆိုင်ရှိသေးတယ်နောက် အေးမေတ္တာလည်း မဆိုးပါဘူး
ကြေးအိုးEi Mon Thinn Kyuမချိုကြီး .... ကြေးအိုးဆိုင်မပါဘူး ... ကြေးအိုးမှာ ၇၄လမ်းပေါ်မှာ အရုဏ်ဦး ကြေးအိုးရှိတယ် အရမ်းကောင်းတယ် ... စန္ဒာမေ ဖက်ထုပ်ပေါင်းဆိုင်မှာလည်း ကြေးအိုးရပေမဲ့ ကျွန်တော်တော့ လုံးဝမကြိုက်ပါ ... ပွစိစိကြီး ဖြစ်နေသလိုပဲ ... နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ နန်း...ရှေ့ က Cafe Queen မှာ ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ကြေးအိုးကောင်းကောင်းရတယ် ... အများကြီးလည်းပါတယ် တစ်ယောက်တည်း စားလို့သိပ်မကုန်တတ်ဘူး ..ရွှေတောင်တန်းကတော့ အရင်ကလည်း နာမည်ကြီး အခုလည်းနာမည်ကြီးပဲ .. တခြားတခြားသော ကြေးအိုးဆိုင်တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ် ကျွန်တော်တော့ ဒီလောက်ပဲ သိပါတယ် :P
( ကဲ.... စဉ်းစားလို့ မရတော့ဘူး ... ကိုယ်ကောင်းတာ သိတဲ့ဆိုင်ရှိရင်လည်း ဖြည့်စွက်ပေးကြပါ )